Xisbiga Wadajir oo war ka soo saaray Xariggii Guddoomiyaha iyo Xoghayaha Xisbiga (Akhriso) – Hornafrik Media Network
Dagaal khasaare geystay oo ka socda degaan ka tirsan G/Hiiraan
Xisbiga Wadajir oo war ka soo saaray Xariggii Guddoomiyaha iyo Xoghayaha Xisbiga (Akhriso)
By HornAfrik	 On Jan 27, 2018
Xisbiga Wadajir ayaa war ka soo saaray xariggii Guddoomiyaha iyo Xoghayaha Guud ee Xisbiga u geysteen maanta duhurkii, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa sharci darro.
Kamaal Gutaale iyo Sayidcali Macalin Cabdulle ayaa maanta duhurkii laga xiray Hotelka Maka Al-Mukarama, halkaasoo ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida ay ka kaxeysteen, inkastoo muddo kaddib la sii daayay.
Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir Kamaal Gutaale iyo Xoghayaha Guud ee Xisbiga Sayidcali Macalin ayaa shir jaraa’id oo ay goor dhow qabteen waxaa ay ku sheegeen in Ciidamo ka tirsan kuwa NISA ay ku soo weerareen Hotel Maka Al-Mukarama, xilli ay halkaas u joogeen Qado.
Waxaa uu sheegay in markii laga waday Hotelka la geeyay guri ay NISA ku leeyihiin degmada Waabari, isla markaana ka qaateen, waxaa uu xusay in ciidanka xiray ay taleefanadooda ka qaateen, kaddibna ay markii dambe sii daayeen.
Dhinaca kale Xisbiga Wadajir ayaa War saxaafadeed uu ka soo saaray xarigga labadan Mas’uul ku ku tilmaamay inay aheyd mid xadgudub ku ah xuquuqda iyo xoriyadda uu muwaadinka siiyay Dastuurka.
Halkan hoose ka akhriso War saxaafadeedka:
Warsaxaafadeed Wadajir 2
Nabad Suggida oo sii daysay Kamaal Guutaale & Sayid Cali
C/raxmaan C/shakuur “Hey’addii Nabadsugida waxay noqotay mid lagu fushado dano siyaasadeed”